टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पताल आफै ‘विरामी’ : न पूर्वाधार, न जनशक्ति ! « News24 : Premium News Channel
टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पताल आफै ‘विरामी’ : न पूर्वाधार, न जनशक्ति !
काठमाडौं । पचासी वर्षअघि हैजाको उपचारका लागि स्थापना गरिएको स्वास्थ्य संस्था हो– टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल । ट्रपिकल तथा सरुवा रोगसँग सम्बन्धित रोगका लागि यो अस्पताल ठूलो ‘रिफरल सेन्टर’ हो । तर, पछिल्लो समय अस्पताल आफैं विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको छ ।
सय शैयाको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ४ शैयाको आइसीयू छ । तर, भेन्टिलेटर नहुँदा मुस्किलले ३ बेड मात्रै सञ्चालित छ । एचआइभी एड्स संक्रमित, कुनै पनि जनावरले टोकेका गम्भीर घाइते, बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु, डेंगु रोगका बिरामीको भर्ना लिएर उपचार गर्ने यो अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ ।
सरसर्ती हेर्दा अस्पताल ‘डम्पिङ साइड’जस्तो लाग्छ । फोहोर र अव्यवस्थाको केन्द्र बनिरहेको अस्पताले सेवा चाहीँ कसरी दिइरहेको होला भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । भवन धेरै पुरानो हुँदा बर्खामा पानी चुहिन्छ भने हिउँदमा चिसो पस्छ । भर्ना भएका विरामी चासोले थप मारमा परिरहेका छन् ।
स्तरोन्नतीको ‘मास्टर प्लान’ बनेपनि जमिनको स्वामित्व अस्पतलासँग छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि अस्पतालसम्मको सबै जग्गा अस्पतालकै हो भनिन्छ । तर, लालपुर्जा न अस्पतालसँग छ, न विभागसँग । जसका कारण निर्माणको योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अस्पतालमा दश जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, ७ जना थप अध्ययनका लागि वीर अस्पतालमा गएका छन् । यसको अर्थ पर्याप्त चिकित्सक छैनन् । सरुवा रोगको उपचारमा अत्यन्त आवश्यक मानिने ‘आइसोलेसन वार्ड’ भएपनि ताल्चा लगाएर राखिएको छ । उपकरण तथा जनशक्ति नहुँदा इबोला, स्वाइन फ्लु, बर्डफ्लू संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक ‘आइसोलेसन वार्ड’ निर्माण भएको १० वर्ष भयो ।
तर, सञ्चालन गरिएको छैन । गम्भीर रोगको उपचार हुने र देशभरबाट महिनामा ४-५ हजार बिरामी आउने राजधानीकै केन्द्रीय यो अस्पताल लथालिङ छ । विरामीको सेवा गर्ने अस्पताल आफैं विरामी छ । तरपनि सुधारको ठोश प्रयास भएको छैन । जे छ, जस्तो छ त्यसैमा जेनतेन चलिरहेको छ । ०